Maxaan Ka Baranay Soo iibsiga Macaamiisha Adoo Ku Lulay Xeyrarka | Martech Zone
Jimco, Abriil 15, 2016 Jimco, Abriil 15, 2016 Cydni Tetro
Nagala bax ciyaarta ciyaarta? Haa! 3DplusMe, shirkad ay heshay WhiteClouds, wuxuu ruqsad ka haystay MLB labadii sano ee la soo dhaafay, isagoo abuuraya khibrado 3D oo is-dhexgal ah iyo alaab 3D midabkeedu dhammaystiran yahay oo loo yaqaan 'ballgame-goers'. Waxaan dhignay oo aan bixinay tikniyoolajiyad awood siineysa kaqeybgalayaasha MLB in lagu qoro kooxda ay jecelyihiin ayna "noqdaan" ciyaariyahan qabashadeena daabacaadda madal. Taageerayaashu waxay doortaan kooxdooda, labiskooda, magaca funaanadooda, nambarkooda iyo sawirka waxayna ilbiriqsiyo gudahood isku arkaan inay yihiin laacib kooxda ay jecel yihiin. Halkaas waxay ka dalban karaan nuqul buuxa oo 3D ah oo gurigooda loo geeyo.
3DplusMe sidoo kale waa barxadda loogu talagalay khibradaha qabashada-daabacaadda shakhsi ahaaneed ee 3D tafaariiqda. Martida noqo waxyaabaha ay ku ciyaaraan ee ay jecel yihiin, tirada waxqabadka, geesi isboorti, ciyaarta fiidiyowga ama dabeecadda filimada, iyo in ka badan, dukaamada sida Target, Toys R Us iyo Wal-Mart.
Marka la eego rikoodhkayaga raad-raac ee labada bey'adood, waxaan diiradda saarnay oo baranay waxa soo jiita iyo beddelaadda macaamiisha, waxaana u maleyneynaa in waxbarashadan si guud loo dabaqi karo, iyadoo aan loo eegin bay'ada. Waa kuwan waxa cilmi-baaristeenna iyo waayo-aragnimadeennu muujinayaan:
Macaamiisha ayaa aad ugu habboon inay iibsadaan markii aad abuurto khibrad u keenta sheekada alaabta. Markay taageerayaashu joogaan munaasabadaha waxay shucuur ahaan ugu mashquulsan yihiin nuxurkaas oo dhaqankooda u dhaqaajinaya khibradaha alaabta.
Jawiga tafaariiqda caadiga ah, marka martidu kaliya agteeda marayso, 15% taageerayaal ah oo la falgalaya waayo-aragnimada 3D ee iibka tafaariiqda ee ASP ee $ 59.00. Khibraddu waxay u oggolaaneysaa qof walba inuu isku dayo bilaash oo u arko inuu yahay superhero ay jecel yihiin ama toy kale. Shaqada khibrada waa in la wado taageerayaasha si ay u iibsadaan. Kuwani waa tirooyin adag marka la barbar dhigo heerka beddelashada tafaariiqda ee 1-2%.
Munaasabadaha ay matalayaan taageerayaasha daacadda u ah, 60% taageerayaasha waxay ku iibsadaan ASP $ 135. Tusaalooyin fiican oo ku saabsan heerkaas beddelidda ayaa lagu muujiyey garoomada taxanaha adduunka, MLB All Star Game Fan Fest, Tababarka Guga iyo jawiyada kale ee dhacdooyinka. Taageerayaashu waxay rabaan inay ka mid noqdaan kooxda khibradda 3D-na iyaga ayaa siisa fursaddaas.
Qaadashada muhiimka ah ee aragtideena:
Khibradaha isbeddelka ayaa kordhiya beddelaadda
Markaad dhisi karto khibradaha wax soo saarka ee abuuraya daqiiqado ahaaneed iyo isdhexgal shucuur leh, dadku waxay rabaan inay iibsadaan. Goobaha tafaariiqda caadiga ah, halkaas oo dhaqan ahaan ay adag tahay in la kordhiyo beddelaadda, waxaan soo caddeynay inaad sare u qaadi karto qiimahaaga adoo u abuuraya macaamiisha khibrado "tafaariiqeed". Waxaan sidoo kale cadeynay in markaad kujirto munaasabadaha sida taxanaha aduunka, Dhamaan cayaaraha Xiddigaha, Comic-con, iyo Super Bowl waxaad ku wadi kartaa isbadal sare adoo adeegsanaya waaya aragnimo adag.
Xiriirinta shucuurta ee sheekadu wadato ayaa fure u ah wadista iibka. Khibraddeennu waxay na siisay talooyin fudud oo ay suuqleydu ku shaqeysan karaan jawi tafaariiq kasta ah.
U adeegso ilahaaga iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga si aad u abuurto "waaya-aragnimo isbeddel leh" oo ku habboon sumaddaada. Kuwani waxay noqon karaan dhacdooyin ballaaran oo dadweyne ama dallacsiinno aad u dhow oo dukaan ku dhow. Tusaale ahaan, waxaan la shaqeynay Ubisoft si aan u siino taageerayaasha awoodda ay ku noqon karaan "Arno" markii Assassin Creed Unity laga bilaabay Ubisoft Lounge ee E3 (Electronic Entertainment Expo). Tani waxay siisay khibrad gaar ah taageerayaasha ku xiran sheekada sheekada hantida.
Abuur waayo-aragnimo ku dhisan rajo iyo reynreyn laga bilaabo daqiiqadaha macaamiisha ay galaan iibka ugu dambeeya. Tusaale ahaan, laga bilaabo xilliga uu taageere soo galo 3DplusMe taambuugga goobta, waa la sasabayaa. Waxay ku bilaabaneysaa iyadoo la hubinayo in wax kasta oo soconaya ay la jaan qaadayaan sheekada ka timid calaamadaha calaamadaha martida ku martiqaadaya "Isku Duub Kooxdaada Aad Ugu Jeceshahay," iyadoo la sii wado xulashada shakhsi ahaaneed ee qaab kasta oo lagu soo gabagabeynayo muujinta ugu dambeysa ee muusigga (muusikada lagu daray) ee dabeecad. Khibraddan isbeddelka ahi waxay si buuxda ula jaanqaadaysaa shucuurta ay dareemeen ka soo qaybgalayaasha dhacdada.
Sii sasabooyin aan la diidi karin. Jardiinooyinka madadaalada waxay ogyihiin in markay soo bandhigayaan sawirrada marti kasta oo saaran safar caan ah oo aysan waajib ku ahayn inay iibsadaan; jiidid shucuur xoog leh ayaa dhici doonta iibintana waa la samayn doonaa! Isla calaamaddaas, saldhigyadayada iskaanka, macaamiisha ayaa iskaanka ku tijaabin kara wejigooda lacag la'aan, isla markiiba waxay arki doonaan sida ay u egtahay sheyga ugu dambeeya, kaas oo gacan ka geysta dhiirrigelinta wax iibsashada.
Tijaabi oo hagaaji: Markaad waayo-aragnimo sheeko-wade u leedahay waa inaad tijaabisaa oo aad tayaysaa si aad u hubiso inaad farsameyneyso geeddi-socod ku hoggaaminaya macaamiisha khibradda si khibrad leh. Waxaad ubaahantahay qaab-dhismeed kuu ogolaanaya inaad aragto waxa shaqeynaya oo aad ku sii wanaajineyso howshaas.
Ganacsatada ugu sareeya waxay ogyihiin in macaamiisha loo keeno sheekada sheyga waa habka ugu wanaagsan ee lagu wadi karo beddelka iyo daacadnimada taas oo ugu dambeyntii kordhinaysa iibka. Markaad rabto inaad u rogto deyrka waa inaad u kacdaa inaad ku dhufato marar badan, wax ka baro garoon kasta ugu dambeyntiina waxaad ku dhici doontaa orod guri.
Tags: Daabacaadda 3d3dplusmeweydiinaya qiimaha tafaariiqdakhibrada macmiilkashakhsi ahaaneedalaabta shaqsiyeed
Cydni waa ganacsade badeecad hormuud ah oo diiradda saaraya dhisidda wax soo saarka iyo wadista soo iibinta macaamiisha. Iyadu hadda waa Madaxweynaha Tafaariiqda iyo Madaxa Sarkaalka Wax soo saarka ee WhiteClouds, yaa soo qaatay 3DplusMe halkaas oo ay ka ahayd agaasimaha guud iyo aasaasaha. Waxay ka shaqeysay ganacsiga tikniyoolajiyadda Disney waxayna la shaqeysay shirkadaha ugu waaweyn iyo tafaariiqleyda adduunka si ay u gaarsiiyaan alaab ay ka mid yihiin Marvel, Star Wars, MLB, MLS, Warner Brothers, Dreamworks, NFL, Disney Stores, Target, Walmart iyo Toys R Us. Iyadu waa Iskaashatada Hawlgalka ee Mercato, oo ah shirkad kobcisa sinnaanta, macallimiin loogu talogalay Goldman Sachs 10k dadaal ganacsi oo yar-yar iyo aasaasaha iyo Madaxweynaha Golaha Haweenka ee 'Tech Tech Council'. Cydni wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee maamulka ganacsiga iyo bachelorka ee sayniska kombiyuutarka ee Jaamacadda Brigham Young.